नेपाल आज | नेपालीसँगको सम्वन्ध छुटाउँन चीनले खासाको वस्ती नै उठायो [भिडियो अन्तरवार्ता]
समाचार व्यापार भिडियो अर्थ रोजगार
तातोपानी नाकाः जनप्रतिनिधि भन्छन्– भन्नलाई खुलेको छ, सामान आउँदैन
शनिबार, ०४ पुष २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
०७२ सालको भूकम्पपछि चीनसँगको ब्यापारीक नाका तातोपानी भन्सार सुस्त छ । सुरुका दिनमा भौतिक संरचना र सडक सञ्जाललाई देखाएर आयात–निर्यातमा कडाई गरेको चीनले कोरोना संक्रमणपछि त्यसमा अझै कडाई गरेको छ । ब्यापार अवरोधका कारण नेपाली ब्यापार/ब्यवसाय प्रभावित छ। ब्यापार घाटा वढेपछि ब्यापारीहरु आत्महत्या गर्न वाध्य हुन थालेका छन् । तर, यसतर्फ सरकारले अझै पनि ठोस कदम चालेको छैन ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमा हाल एक सय कन्टेनर जाँचपास र ३ सय कन्टेनर स्टकमा राख्न सक्ने क्षमता छ । तर, अहिले दिनमा २/३ वटा कन्टेनर मात्रै आउने गरको प्रमुख भन्सार अधिकृत लालवहादुर खत्री वताउँछन् ।
०७२ सालको भुकम्पले भत्काएका संरचना वनाउन समय लागेको र संरचना सहज वन्दै गएपछि लोसार पर्व र ०७६ सालको पुषदेखि कोरोना संक्रमणका कारण ४ महिना नाका पुर्ण रुपमा वन्द भएको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पा वताउँछन् । त्यसपछि खुलेको नाका नाम मात्रैको संचालनमा रहेको उनले वताए ।
‘तातोपानी नाका पुर्णरुपमा वन्द पनि होईन, खोलेको पनि छैन । यसले स्थानीयलाई ठुलो असर परेको छ’ उनले भने–‘यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो देशको सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु कानमा तेल हालेर वसेका छन् ।’
तातोपानी नाका रहेको भोटेकोशी गाउँपालिका भौगोलिक हिसावले अति नै विकट क्षेत्र हो । यहाँ खेतीपाती नहुँदा स्थानीयवासी पर्यटन ब्यवसायलाई नै मुख्य पेशा वनाएर वसेका थिए । तर, नाका नै वन्द भएपछि हातमुख जोड्न पनि समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘दिनमै २/३ सय गाडि आवत–जावत गर्ने ठाउँमा २ वटा कन्टेर आउनु भनेको नाका वन्द नै हो’ उनले थपे–‘हामीले यस विषयमा वारम्वार भन्दा पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’
शेर्पाका अनुसार यो क्षेत्रमा कमाई हुने अर्को कुनै विकल्प छैन । वाढि–पहिरोले समस्यामा रहेका स्थानीयहरु अहिले पनि तातोपानी नाका खुल्ने आसमा वसेका छन् । तर, वर्षौ वितिसक्दा पनि नाका सहज नहुँदा समस्या ज्यूका त्यूँ छ। कसरी गरी खाने र कहाँ जाने ? भन्ने समस्या सुरु भएको उनीहरु वताउँछन्।
नाकामा समस्या सुरु भएदेखि नै आन्तरिक पर्यटकको संख्या सुन्यमा पुगेको छ । ब्यापार ब्यवसायका लागि स्थानीयले खरिद गरेका करिव १५ सय कन्टेनर पनि थन्किएर वसेका छन् । होटल, लजलगायतका अन्य ब्यवसाय पनि पुर्ण रुपमा वन्द भएको शेर्पाले जानकारी दिए । ‘धेरै मान्छेले ऋण लिएर होटल ब्यवसाय संचालन गरेका छन् । ५/७ तले घर छ। तर अहिले सवै ढोका लागेका छन्’ उनले भने–‘अव पेशा/ब्यवसाय केहि छैन। धेरैको कन्टेनर र घर वैंकले तानिसक्यो। मालिक जति विदेश हिड्न थालेका छन् ।’
नाकाको समस्याका कारण ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै नसकेर घर र गाडि नै मायाँ मार्नेको संख्या वढ्दै गएको उनले वताए ।
चीनियाँ अधिकारीहरुले सुरुकै दिनदेखि तातो पानी भन्सार सञ्चालन गर्न नचाहेको जानकारी दिएका उनले स्थानीयकै दवावका कारण संचालनमा आएको नाका पनि नाम मात्रको भएपछि सर्वसाधारणलाई जिविका चलाउनै समस्या भएको वताए । ‘सवैतिरको नाका खुलेको छ, चीनको नाका मात्र किन वन्द ? भनेर हामीले पटक–पटक भन्यौ। त्यसपछि एउटा÷दुईटा गाडि पठाउने गरिएको छ। तर, त्यसको कुनै अर्थ छैन’– उनले भने।
नाकामा अवरोध गरेर चीनले नेपालीलाई हेपेको उनको विश्लेषण छ । तिब्वतको खासामा वसोवास गर्ने चीनियाँ नागरिक र नेपाली नागरिकको सम्वन्धका कारण नाकामा समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्ने उनले अनुमान गरेका छन् । ‘केहि समय अघिसम्म खासामा चीनियाँ नागरिकको एउटा वस्ति थियो। अहिले त्यो वस्ति उठाएर करिव ८ सय किलोमिटर टाढा सिगात्सेमा पुर्याईएको छ’ उनले थपे–‘उनीहरु खासा आउन चाहिरहेका छन्, तर दिएको छैन । नेपालीहरुसँग उनीहरुको सम्वन्ध छुटाउनकै लागि अहिले नाका वन्द गरिएको हो ।’
तिब्वतमा चीन विरोधी गतिविधि वढेकाले त्यहाँको वस्ति उठाएर नाका वन्द गरिएको हल्ला चाहिँ आफुहरुले सुनेको शेर्पा वताउँछन् । ‘हाम्रा धेरै चेलीवेटीको उता विवाह भएको छ। उताका पनि यता आएका छन्’ उनले थपे–‘आफन्त भेटघाटमै समस्या आएपछि हामीले पनि त्यस विषयमा चासो राख्यौं। सुन्नमा आए अनुसार स्वतन्त्र तिब्वतको गतिविधि वढेकाले त्यसो गरिएको रहेछ ।’
चीनले जे सुकै भनेपनि नेपालमा भने चाईना विरोधी कुनै गतिविधि नभएको उनले वताए । विभिन्न वहाना वनाएर चीनले नेपालीलाई हेप्न र पेल्न खोजेको शेर्पा वताउँछन् । यस विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु वोल्नु पर्ने उनको माग छ । ‘भोटेकोशी गाउँपालिकालाई समस्यामा पार्ने चीन हो। यस विषयमा नेपालका नेता, सांसद र मन्त्रीहरु वोल्नु पर्ने हो’ उनी भन्छन्–‘सञ्चालन नै नगर्ने हो भने यति ठुलो लगानी गरेर वनाएको सुख्खा वन्दरगाहा केका लागि ?’
भारततिरको नाकामा सामान्य समस्या आउँदा हल्ला गर्ने नेता, सांसद र मन्त्रीहरु चीनतर्फको नाकामा यति ठुलो समस्या आउँदा पनि नवोल्दा भने आफुलाई आश्चर्य लागेको उनले वताए । समस्याको जानकारी भएर पनि वेवास्ता गरेपछि ब्यापारीहरु एक जुट भएर नाका पुर्ण रुपमा वन्द गर्ने अभियानमा लागेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘दिनमा २/३ सय गाडि आउनु पर्ने सुख्खा वन्दरगाहमा २/३ वटा गाडि आईरहेका छन्। यसले ब्यापारीलाई चिढ्याएको छ’ उनी भन्छन्–‘यस विषयमा ब्यापार संघले आन्दोलन गर्न खोजी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन गर्नु भन्दा नाका नै वन्द गर्ने विषयमा ब्यापारीहरु छलफल गरिरहेका छन् ।’
नेपाल–चाईना चेम्वर अफ कमर्शको अगुवाईमा चीनियाँ पक्षसँग कुराकानी भईरहेकाले त्यतिन्जेलसम्म ब्यापारीहरु चुप लागेर वसेको उनले वताए ।
राजदुतले पनि टेरेनन्
७/८ महिनाअघि नेपालका चीनियाँ राजदुत स्थलगत निरिक्षणका क्रममा तातो भन्सार कार्यालय पुगेका थिए । सो समयमा भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालयले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय सममस्या सुनाएका थिए । स्थानीयका समस्या सुनिसकेपछि उनी त्यहिवाट केरुङ्ग गएको उनले वताए । नाका अवरोधका कारण मान्छे विस्थापित हुन थालेको र रोजीरोटी चलाउन समस्या भएको विषयमा स्थानीयले राजदुतलाई नै सुनाएका थिए ।
तर, राजदुतको ब्यवहार सकारात्मक देखिएन । शेर्पा भन्छन्–‘स्थानीयका समस्या सुनेपछि त्यस विषयमा पहल गर्ने वाचा गरेर हिडेका राजदुतले कुनै पहल नगर्नु भनेको वास्ता नगरेकै हो। सवै कुरा वुझेको मान्छेले पनि वेवास्ता गरेपछि अरुले गरेनन् भनेर कतिदिनसम्म चिच्याउँने ?’
चीनियाँ सुरक्षाकर्मीको दादागिरी
कोरोना संक्रमणपछि चीनले नेपाली नागरिकलाई सिमा क्षेत्र प्रवेश गर्न दिएको छैन । तर, चीनियाँ प्रहरी भने अहिले पनि तातोपानी भन्सारसम्म आउने, नेपालमा भईरहेका गतिविधिको जानकारी लिने र फर्कने गरेका छन् । उनीहरुका लागि कसैको अनुमति र पासको आवश्यक्ता नपर्ने शेर्पाले वताए । ‘प्रहरी हुँ भन्दै सिभिलमा आउँछन्। प्रशासनले पनि केहि गर्दैन। उनीहरु आउँछन्, जान्छन्।’
भुकम्प अघि र पछिको ब्यवहारमा भने धेरै फरक भएको उनले जानकारी दिए । ‘भुकम्पअघि त गाउँगाउँ डुल्ने, नेपाली नागरिकलाई हप्काउने, उनीहरुकै इसारामा हिड्नु पर्ने अवस्था थियो । प्रहरी प्रशासन पनि केहि वोल्न नसकेपछि चुप लागेर वस्थ्यौं’ उनले भने–‘तर, मादक पदार्थ सेवन गरेर जथाभावी गर्न थालेपछि भने स्थानीयले प्रतिकार गर्न थालेका थिए ।’ एकदुई ठाउँमा त सर्वसाधारणले नै उनीहरुलाई खद्नु परेको पनि उनले वताए ।
‘नाका सञ्चालन हुँदा गाडि लिएर जाने धेरै नेपालीलाई दुब्र्यवहार गर्ने, कुट्ने गर्थे। उनीहरुको सामान छोईसकेपछि किन्नै पर्ने वाध्यता हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्–‘प्रहरी पनि मिलेपछि नेपाली जस्तो सुकै ब्यवहार पनि सहन वाध्य हुन्थे ।’
चीनको अघोषित नाकावन्दीका कारण उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि भईरहेका पहलका विषयमा भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पासँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला।